India Kugadzira Inobudirira Drone Aviation Kugonesa Izvo Zvikuru Zvakanaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India Kugadzira Inobudirira Drone Aviation Kugonesa Izvo Zvikuru Zvakanaka
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
India Drone indasitiri
VaJyotiraditya Scindia, Gurukota rezvekufamba nendege muIndia, nhasi vataura kuti basa rehurumende zvachinja pasi pehutungamiriri hwaMutungamiri Narendra Modi, uye iri kushanda semugadziri, kwete mutongi, vachitarisa nzira nyowani yeuchapupu-hwakavakirwa kuronga kwemitemo yedrones.
Drone tekinoroji ichaunza avo vanogara kumahombekombe kunzvimbo yekuvandudza.
Kune zvirongwa zvekushandisa madhiraoni kumepu zviuru zvemisha izvo zvinopa indasitiri yedrone yeIndia kukurudzira kukuru.
Mukushandiswa kwemazuva ano, madhoni angave anoshanda mukupa majekiseni, zvichikonzera kuwedzera kwekudzivirira chirwere.
Vachitaura musangano we "Drones for Public Good - Mass Awareness Program," zvakabatana zvakarongwa neFederal of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) nemasangano emari ebudiriro (DFI) vachishanda pamwe neWorld Economic Forum, VaScindia vakati tekinoroji kusimudzira kwakakosha uye Drone tekinoroji ichaunza avo vanogara kumahombekombe kunzvimbo yekuvandudza. "MaDrones anoita basa rakakosha mukubatanidza vanhu kubva kureba uye hupamhi hwenyika," akadaro.
India senyika, vakadaro VaScindia, kazhinji vanga vari muteveri mukushanduka kwehunyanzvi kana tekinoroji. Aka ndekekutanga nguva yatiri kutarisa kuve vatungamiriri, akadaro Gurukota Rezvekufambisa.
Iyo nyowani drone inotonga, ichiperekedzwa panguva pfupi pfupi neiyo yekugadzira-yakabatana inokurudzira (PLI) chirongwa chedrones, inopa iyo indent indasitiri yekugadzira epamba kukurudzira kukuru. "Chikamu che40 muzana chekuwedzera kukosha kwechikamu ichi chinopa mukana wakasarudzika wekutanga," vakadaro VaScindia.
Akaenderera mberi achiti kuti chero hunyanzvi hwekubudirira hubudirire panoda nhanho nhatu - marongero emitemo, kurudziro yemari, uye chimiro chechinodiwa. Hurumende yeIndia, akaenderera mberi achiti, pasi peSurvey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) scheme iri kuronga kushandisa drones kumepu zviuru zvemisha zvicha ipa indasitiri yedhiraoni yeIndia kukurudzira kukuru.
India ine dzimwe nzvimbo dzakaoma-kusvika-kusvika, uye drones yaizoshanda mukupa majekiseni, zvichikonzera kuwedzera kwechirwere chekudzivirira, akawedzera gurukota. "Hurumende iri kutoshanda semutengi anchor nekushandisa mishonga yekudzivirira uye kugadzira mepu nekugadzira chimiro chekuda kwetekinoroji yedrone muIndia," vakadaro VaScindia. Hurumende yakabvumidza PLI Scheme kuti indasitiri yedrone iunze mari nyowani nekusimudzira mabasa muIndia, akadaro gurukota. Akataura kuti tekinoroji yedrone iri munzira inotiza uye akakurudzira iwo maindasitiri miviri kuti ibatsire tekinoroji kusimuka.
VaRajan Luthra, Sachigaro weFICCI Komiti yeDrones uye Hofisi yaSachigaro - Musoro weMapurojekiti Akakosha, Reliance Industries, Ltd., vakati kurima ndeimwe yezvikamu zvakakosha muIndia ine mikana mikuru yemisika uye kushandiswa kwedrones kwezvekurima. ichaendesa zvakakosha kune varimi uye munhuwo zvake.
Vignesh Santhanam, Aerospace uye Drones, World Economic Forum, vakati drones inofanirwa kusimbisa iyo agri yekutsvagisa system kutsigira chikamu kuburikidza nekuwedzera goho uye kukwidziridzwa kwevanhu vekumaruwa kuti vawane raramo nekuve imba yechiedza yechina IR tech.
VaSmit Shah, Director weDy Partnerships, DFI, vakati, "Tinogamuchira zvakaitwa neMutungamiri sevashandi veiyi indasitiri."